Faah Faahin:-Duqeyn lagu dilay Hogaamiyeyaal Al-shabab oo ka dhacay Gedo | Kobciye24.com
Faah Faahin:-Duqeyn lagu dilay Hogaamiyeyaal Al-shabab oo ka dhacay Gedo
Dadka degaanka iyo mas’uuliyiin kale ayaa sheegay in in kabadan 100dagaalamayaal ka tirsan Al-shabab oo ay ku jiraan 20-hogaamiye la rumaysan yahay in lagu dilay Koonfurta Soomaaliya duqeyn ay diyaradaha dagaalka Mareykanka subaxnimadii Sabti ka fuliyeen Gobolka Gedo.
Dadka deganka iyo saraakiil dhinaca amaanka ah ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay bartilmaamaysadeen meelo ay ku dhuumalaysanayeen dagaalamayashasi oo ku sugnaa degaanada Wargaduud iyo El-Adde halkaasi oo lagu dilay askar Kenyan ah bishii January ee 2016-ka.
Dadka duqeynta lagu dilay waxaa lagu sheegay inuu kamid yahay Abdirahman Fillow iyo bdirahman Ben Dutie,sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu burburiyay laba gaari oo siday waxyaabaha qarxa kuwaasi oo ku sii jeeday Wargaduud.
Masuul diiday magacisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in habeenimadii jimcaha ahayd duqeynta Mareykanka lagu dilay hogaamiyaal ka tirsan Al-shabab uu kamid ahaa Cabdiraxmaan Filow iyo 85-dagaalamayaal.
Dadka ku nool Ceel cade ayaa sheegay inay maqlaayeen dhawaqa qaraxyo xoogan oo ay rumaysan yihin inay duqeyn ay ahaayen.
Mid kamid ah dadkja degaanka ayaa sheegay inuu maqlayay duqeyn ku socotay saldhiga Al-shabab e meel u dhoe Ceel cade balse waxa uu ka gaabsaday dhawaca ka dhashay weerarka waxa u yiri (waxan maqalnay diyaarado kadibna bambaanoyin).
Duqeyntaasi ayaa timid saacado kadib marki Mareykanka xaqiijiyay inay ciidamo u soo direen Soomaaliya.